Ọ Dị Mma Decjụ Okwu Na-adịghị Mma | Martech Zone
Ọ Dị Mma Decjụ Okwu Na-adịghị Mma
Mgbe m na-ekwu okwu, dịka m mere taa, nye ndị na-ege ahịa azụmaahịa na-achọsi ike ịde blọgụ, nke a bụ nkwupụta nke na-agbanye ọkụ ọkụ n'isi ha.
Eeh. I nwere ike ikwu ihe ọ bụla. Eeh. Ọ dị mma ịjụ ikwu okwu na-adịghị mma. Ana m akwado ndị ahịa niile ka ha kwuo okwu. M na-agbakwa otu ụlọ ọrụ ahụ ume, na-enyocha ohere na ihe ọghọm metụtara okwu na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ọ bụ nkatọ na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ gị nwere ike idozi ma ọ bụ edozila, ọ ga-emepe gị ohere dị egwu iji gosipụta nghọta ma gosipụta na ọ bụghị naanị na ị na-ege ntị, kama ị na-eme nkatọ ndị ọbịa gị.
Ọ bụ ihe ijuanya na anyị niile na-anọdụ ala na-agwa ndị mmadụ otu esi emeghe na nghọta anyị chọrọ ka azụmaahịa na ndị were anyị n'ọrụ bụrụ… mana mgbe anyị nọ n’ọnọdụ ịdị na-egosipụta nghọta, anyị na-enyekarị ya echiche nke abụọ. Ekwenyere m na e nwere ọnụ ọgụgụ ndị na-aza ajụjụ na ọdịnaya nke onye ọrụ kwesịrị ka a na-enyocha ma nyochaa nke ọma:
Visitorsfọdụ ndị ọbịa ga-abụ ajọ njọ, akaja, na-atụda uche na / ma ọ bụ na-emechu ihu. M ga - agba ndị azụmaahịa gị ume ka ha zaghachi ndị a ihe ozugbo iji wee gbochie ọnọdụ ahụ ma mee ka ha mata na ị gaghị ekwe ka ọdịnaya dị ka na saịtị gị. Echeghị m na onye ọ bụla ga-ata ụta azụmahịa maka ịzaghachi okwu nwere ike imebi azụmahịa ha. Ọ bụghị banyere nghọta n'oge ahụ, ọ bụ maka ichedo azụmahịa gị ka ndị ọrụ gị wee nwee ike ịga n'ihu na ọrụ ha.
Nke ahụ kwuru, adala okwu ahụ ọsọ ma gaa n'ihu dịka ọ nweghị ihe mere. Ọ bụrụ na mmadụ nwere obi ike ịkparị gị na weebụsaịtị gị, ha ga-enwe obi ike ịkọcha gị na weebụsaịtị ha. Ohere maka azụmaahịa bụ ịgwa onye ahụ okwu 'na nkwụsị'. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi ọnọdụ ahụ, gbalịsie ike iwepụ ya bụ maka ọdịmma gị.
Nkwupụta dị oke egwu
Visitorsfọdụ ndị ọbịa ga-akatọ echiche gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Nke a bụ mpaghara ntụ ntụ ebe ị nwere ike ịhọrọ ịjụ ikwu okwu ma mee ka ha mara, ma ọ bụ ka mma - ị nwere ike ịnagide nkatọ ahụ n'ihu ọha ma yie dike. I nwekwara ike ikwe ka okwu a nọrọ… ọtụtụ oge ndị mmadụ na-a gladụrị ọ gladụ na ha gbarapụ ma gaa n'ihu. N'oge ndị ọzọ, ị ga- juru ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ ga-agbachitere gị!
Ọ bụrụ na ọ bara uru na nkatọ, ikekwe ị ga-enwe mkparịta ụka gị na onye dị otu a…
Doug, a natara m okwu gị n'usoro nkwụsị m na ọ bụ ezigbo nzaghachi. Achọghị m ịkekọrịta nke a na saịtị ahụ - enwere m olileanya na ị ghọtara - mana echiche gị pụtara ọtụtụ ihe nye anyị ma anyị ga-achọ itinye gị na bọọdụ ndụmọdụ ndị ahịa anyị. Nke a ọ ga - abụ ihe ị nwere mmasị na ya?
Enwere ụgwọ ọrụ na nsonaazụ maka ịchebe negati. Ọ bụ ezie na ị na-eche na ị na-egbochi blog gị site na nleghara anya, ị nwere ike ịhapụ ịtụkwasị ndị na - agụ akwụkwọ gị obi - ọkachasị ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ị na-ezere enweghị isi. Echere m na ọ bụ nlezianya edozi ma ị ga-apụta n'elu mgbe ị nwere ike idozi esemokwu ahụ, ma ọ bụ jiri obi eziokwu kọwaa ụzọ gị site na ya.
Ezi echiche ga-abụ ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ihe ị na-ekwu…. tụkwasa m obi! Ọ dị ịtụnanya na ndị mmadụ nwere obi ụtọ na weebụ. N'ime 'ụbọchị ụmụaka' nke webụ, a na-akpọ okwu eji ede ozi email dị egwu nye onye ọzọ 'ire ọkụ'. Anụbeghị m ọtụtụ ihe banyere ndị folks 'flamed' mana enwere m n'aka na ọ ka na-eme.
Nsogbu nke 'ire ọkụ' bụ na iwe iwe gị na enweghị nlebara anya nwere ebe na-adịgide adịgide na net. Ntaneti gha adighi echefu echefu, onye, ​​ebe ga-enwe ike igwu ihe ruru unyi. M n'aka na m hapụrụ m òkè nke na-adịghị mma kwuru si n'ebe, ma ụbọchị ndị a, m na-na na na na-enwe a ike aha online. Ekwenyere m na ọtụtụ ndị (uche zuru oke) maara nke ọma aha ha n'ịntanetị n'oge a ma ha ga-eme ike ha niile iji chebe ya.
Ihe atụ bụ John Chow na-ekpughe nke maniacal, ọ bụ ezie na emighị emi, nkata nke onye na-ede blọgụ iji jiri okwu mee ihe na-adịghị akwụwa aka ọtọ azụmaahịa na ntụziaka ya. John rụrụ nnukwu ọrụ nyocha na igosi akwụwaghị aka ọtọ nke blogger ahụ a na-ekwu. Aha John nyere ọkwa ya zuru oke… onye blogger bibiri aha ya. John ka kọọrọ ya!
Onwe m, agbakwuru m ndị na-ede blọgụ bụ ndị kpara m aka na ụfọdụ n'ime ederede m. Mmeghachi omume ahụ dị ịtụnanya, ọtụtụ ndị egeghị ntị na nkatọ m na-akatọ ha… ha zaghachiri na ịkpọasị na adịghị njọ nke 'ọkụ' ahụ. N'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, enwere m onye na-ede blọgụ (onye a maara nke ọma) onye kwụsịrị ịbanye n'ụgwọ ya maka ngwaahịa nke mepụtara maka ya. Ọ zerekwara ịnakọta ego ụlọ ọrụ m tinyere ya.
Agaghị m 'apụ' ya na blọọgụ m n'agbanyeghị na ọ na-adọrọ adọrọ. Nanị ihe m kwenyere bụ na ndị mmadụ ga-elezi m anya ọjọọ. Enwere m okwukwe na ọ ga-enweta ihe na-abịakwute ya ụbọchị ụfọdụ. Osplọ ọrụ a na-abụkarị ezigbo ndị enyi na ndị ọrụ ibe na-enwe ọ cheụ. Ndị ahụ kpọrọ ‘asị’ nọ n’akụkụ ọnụ, ‘ndị ọ na-enwu ọkụ’ nọkwa n’azụ.
Etinyela otutu echiche na ntaneti na ntaneti… ihe egwu di na nhichapu gi bara uru karia uru nke ngbako na ikike ulo na aha. Echefula na ọ dị mma ịjụ ikwu okwu na-adịghị mma.
Tags: Anita OgidiDuct Mezie MarketingJohn JanschMichael Stelznerogbako ogbako obere ntaneti nke ntanetiobere azụmahịaogbako nta ahiaObere Azụmaahịa
Etu ị ga-esi wuo eserese onyonyo na CSS
Internet Explorer na-echegharị maka iji ya
Ọkt 4, 2007 na 8:04 AM
Ezi post, Doug. Nke a bụ n'ezie ebe isi awọ nke ọtụtụ mmadụ na-aghọtaghị. Ihe mgbaru ọsọ zuru ezu, n'ezie, bụ ịbụ onye nwere ọgụgụ isi (ọ dị mfe ikwu karịa eme, ama m). Naanị n'ihi na ị nwere ike ịme okwu na-ezighi ezi ma zere ndị na-adịghị mma apụtaghị na ị ga-aga ọhịa ma gbalịa igosipụta foto Rosy nke nzukọ gị, ngwaahịa gị ma ọ bụ akara gị.
N'ezie, ikwu okwu nkatọ pụrụ ịdị ike karịa nanị igosipụta okwu obi ụtọ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma gosipụta ike na nlekọta.
Ọkt 4, 2007 na 9:19 AM
Amaghị m na igbochi ụdị # 2 ahụ, nkọwa dị oke mkpa bụ ezigbo echiche. Karịsịa site n'ikwu na ị chọghị "ịkekọrịta ya na saịtị ahụ - enwere m olileanya na ị ghọtara."
N'ikwu eziokwu, mba anaghị m aghọta.
Na òkù nke isonye na Board Advisory Board - gịnị bụ ihe ahụ? Okwu mkparịta ụka apụtaghị ihe ọ bụla? Kedu ihe nwere ike ịbụ na ọtụtụ email kwa ọnwa na-ajụ otu ajụjụ? Ka ọ bụ ezigbo Board na mmadụ tozuru ịbụ onye n'ihi otu okwu na-adịghị mma? M ga-eche na ọtụtụ ga-emesị kwenye na 'nhọrọ' dị otú ahụ bụ naanị ụzọ iji hichapụ okwu ma mee ya.
Ọ bụrụ na otu nzukọ ga-ehichapụ ikwu okwu eziokwu, nke edepụtara nke ọma na ọ bụghị "pụtara", ha ga-ahapụ ka okwu ahụ guzoro. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ mmechi iwu na oge a nke nghọta.
Ọkt 4, 2007 na 12:28 PM
Ndewo Jonathan, echere m na anyị na-emekọ ọnụ, ikekwe akọwaghị m onwe m nke ọma. Ana m ekwu maka blọgụ azụmahịa na ọ bụghị blọọgụ izugbe. Na blọọgụ ụlọ ọrụ ekwenyere m na mkpesa ọ bụla dị oke mkpa kwesiri inyocha ya nke ọma iji kpebie ma enwere uru ibipụta okwu a ma ọ bụ na ọ nweghị.
Nkwupụta dị ka, “Ahụrụ m ngwa gị n'anya mana ị maara na ị nwere ike ịgafe usoro paswọọdụ gị site na ime x, y na z?”. Ọ bụ okwu na-ewuli elu, ma na-enye aka, mana o siri ike nke ị ga - achọ biputere maka ọha mmadụ n'ihi na ọ na - etinye azụmaahịa gị n'ihe egwu.
Otu ụlọ ọrụ na-adụ ndị ahịa ọdụ bụ otu ìgwè ndị ahịa 'atụkwasịrị obi' ndị ị na-akpọ mgbe niile iji nyochaa ngwaahịa na ọrụ gị iji nye ndụmọdụ. Ọ bụrụ na ịnwere onye na-akatọ ụlọ ọrụ gị ma hapụ gị ozi na-ewuli elu na saịtị gị, ị ga-enwerịrị ike ha.
Ma ị biputere okwu ahụ dị n'aka gị - ekwenyere m gị na, ọtụtụ mgbe, na-ebipụta nkatọ na-adịghị mma nwere ike ịkwụ ụgwọ ogologo oge ma ọ bụrụ na azụmahịa gị nwere okwukwe n'onwe ya iji dozie nsogbu a.
Ọkt 7, 2007 na 9:33 PM
Enweghị m ike ịsị na ekwenyeghị m gị, ọkachasị nye ihe atụ gị, mana enwere m obi abụọ (ọ bụghị nke esemokwu gị) nke ụlọ ọrụ nke yiri ka ọ na-enwe ọ overụ dị ukwuu itinye ndị mmadụ n'ọnọdụ ụfọdụ ndụmọdụ dịka ụzọ isi mee ka ha pụọ . M na etinye aka na ndoro-ndoro ochichi ma ahuru m otutu ndi mmadu ichikota uche-ha nke bu na obi adighi ya nma.
N'ikwu ya, ikwu okwu nlelị kwesịrị iji ụdị nkọwa ọ bụla bịa. “Ngwaahịa gị eme nzuzu” anaghị arụ ọrụ.
Ọkt 4, 2007 na 10:18 AM
Echere m na ị na-esi na obi nke "tranparency" nke na ịde blọgụ. Otu ihe a na-aga maka ịhazigharị ihe ndị ọrụ gị na-ekwu na blọọgụ ụlọ ọrụ.
Echere m na e nwere ihe abụọ dị iche iche nke "nghọta" na-eme n'ihi na nke nọ n'ọrụ ụlọ ọrụ ịde blọgụ:
1. Ezigbo mkparịta ụka gị na ndị ahịa gị.
2. Ahaziri PR mgbe ị mejọrọ.
Nke mbu bu ezigbo uru nke nbido nke ntaneti. Ọ dị mfe ịnweta nzaghachi site n'aka ndị ọrụ gị, ikekwe n'ihi na ndị mmadụ nwere ahụ iru ala karịa ide ihe na blọọgụ ha ka ha wee ghara inwe ntụsara ahụ ịgwa gị na ekwentị ma ọ bụ na usoro nzaghachi nke gị. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịza ozugbo na nkwupụta ma ọ bụ na blọọgụ nke gị, mmadụ niile na-enweta mmeri.
Nke abuo bu nke yiri ka o ghaghi ihie uzo. Ọ bụrụ na ị na-ekweta "hey, anyị mere a ndudue ke akpatre ntọhapụ nke anyị ngwaahịa" mgbe onye ọ bụla na-ama ebo gị ebubo nke ịghasa ihe elu, olee otú nke ahụ bụ n'ezie uzo? Isi uru dị ka ọ bụ na ndị mmadụ na-eme ka ọ dịrị gị mfe karị n'ihi na ọ bụ onye na-ede blọgụ ahụ, ọ bụghị ngalaba PR na-enweghị ihu. “Anyị mehiere. Anyị bụ naanị mmadụ. Anyị abụghị ndị ọjọọ. Anyị gbalịrị. Anyị ga-eme nke ọma n'oge ọzọ. "
Ọkt 4, 2007 na 12:31 PM
Ọ bụ ebe magburu onwe ya! Ohere inweta blog ụlọ ọrụ bụ iduga mkparịta ụka ahụ ma ghara imeghachi omume na ya. Mụ na otu onye na-ere ahịa nke nwere ihe ọhụụ 2 n'oge na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ ọ bụghị otu okwu na ya bụ na blog ha.
Akwụsịrị m ịgụ blọọgụ ha. O doro anya na ha achọghị ịgwa m eziokwu na ịgwa m eziokwu, ha chọrọ ịnwa izochi okwu ahụ. Oge kacha mma maka ha biputere gaara abụ n'oge ọpụpụ iji mee ka ndị mmadụ mara na ha nọ n’elu ya. Kama, ha atụfuola m niile.
Ọkt 7, 2007 na 1:56 PM
Doug - Akwa, oke post. Ekwenyesiri m ike na ime ihe n'eziokwu, nleghara anya, ezi obi, wdg. Na-adị njikere ịbụ otu n'ime isiokwu ndị ọzọ na-agbawa agbawa maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ n'otu aka na weebụ.
Dabere na ahụmịhe nke m, amalitere m iso ndị mmadụ na-arụ ọrụ na isiokwu nke ijikwa onwe ha "ịre ahịa n'ịntanetị" ma ọ bụ ntanetị "ụdị nke onwe," nke bụ akụkụ nke ihe a dum. Nhazi njikwa abụghị ihe ọhụụ, mana anyị nọ n'ọgbọ na -achịghị njikwa yana igwe nchọta pụtara na ọdịnaya - ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ eziokwu - nwere ike ịdịru ebighi ebi. Algọridim nke Google, ọkachasị, na-akwụkarị ụgwọ maka ewu ewu, ọ bụghị ntụkwasị obi nke nwere ike ibute nsogbu nye onye ọ bụla nke ọha na eze iji dọta uche na nkọwa.
Ozi m bụ otu: jikwaa akara aka gị na weebụ. Mepụta ụdị dijitalụ nke gị, ọdịnaya gị. Na - n'ihe banyere post gị na-enye ndị mmadụ ohere B post ikwu ihe a na-ekwu n'ụzọ doro anya na ọ bụghị n'eziokwu ma ọ bụ n'eziokwu - M ga-asị na ozi anyị dabara nke ọma.
Daalụ maka post.
Ọkt 7, 2007 na 2:26 PM
Daalụ maka echiche nzaghachi, Stephanie! Ọ bụ echiche na-adọrọ mmasị gbasara Google, ị ziri ezi. Anọ m na-agụ David Airey dere na nso nso a banyere ntaramahụhụ nke Google ma ọ bụ ihe atụ zuru oke. David nwere ntụkwasị obi dị ukwuu, mana Google tara ya ahụhụ maka 'ụlọ ọrụ njikọ ọ debere' ọ bụghị ọdịnaya ahụ.
Dị ka aha na-adịwanye mkpa, Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ ga-ekewapụ ntụkwasị obi na ewu ewu. Ekwesighi m ijikọ njikọ ndị uwe ojii Google, ha kwesịrị!
Ọkt 7, 2007 na 9:47 PM
Ọ bụ ihe ọchị na nke a agbanweela njikwa aha ya. Firmlọ ọrụ m nọ na ya, Abraham Harrison, na-eme ọtụtụ nnweta ihe ntanetị na ntanetị ma anyị na-amalite ịhụ mbido nwere mmasị na ọrụ ndị ahụ. Na nso nso a ka m na-ede blọgụ banyere nke a n'onwe m, na blog, Mkparịta ụka Ahịa (http://marketingconversation.com/2007/10/04/reputation-management-of-magnets-and-lead-paint/)
Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịmụta na njikwa aha ha karịrị ihe ọdịnala. Okwu na-adịghị mma nwere ike ịdị ogologo, ogologo oge.